विदेश गएका छोराहरूमा एउटाको शव आयो, अर्काे चैं जेलमा! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > विदेश गएका छोराहरूमा एउटाको शव आयो, अर्काे चैं जेलमा!
admin July 29, 2019 प्रवास	0
काठमाडाैँ । उनी सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका ८ साङबारीकी ६१ बर्षीय कुमारी गुरुङ । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि राजेगारीको खोजीमा जेठा छोरा रामबहादुर गुरुङ ११ बर्ष अघि मलेशिया हानिए । ४ बर्ष पछि भाई नेत्र बहादुर गुरुङलाई पनि उतै बोलाए । घरमा वृद्ध बाबु आमालाई बेला बेलामा फोन गर्दा दुवै भाइ घरमा आएर पक्की घर बनाउने र गाँउमै केहि गर्ने सुनाउँथे । तर एक वर्ष अघिबाट दुवै छोराको फोन आउन छोड्यो ।
छोराहरुको बाटो कुरेर बसेका बाउ आमाले गत सालको साउनमा अपत्यारीलो खबर आयो । मलेशियामा ब्लक उद्योगमा काम गर्दै गरेका कान्छा छोरा नेत्रको मे*शिनमा च्यापिएर ज्या*न गएको खबर उनका साथीले सुनाएका थिए । त्यसको केहि समय देखि जेठा छोराको समेत फोन आउन छोड्यो । कान्छो छोराको मृ*त अनुहार हेरेपछि बाबु सुरुमा छैनन, आमा रोगी छिन् । जेठो छोराको अत्तो पत्तो नपाएका उनीहरुलाई केहि दिन अघिमात्रै छोरीको म्यासेन्जरमा आएको एउटा अडियोले झन् निराश बनाएको छ ।
अडियोमा रामबहादुरले आँफुलाई जेल परिर्वतन गर्न लाग्दा फोन पाएर बोलेको भन्दै जेलमा के हुन्छ, कहिले फर्कीन्छ भन्ने थाहा नपाएकाले नआत्तीन त भनेका छन् तर बाउआमाको मन कहाँ मान्थ्यो र । ‘म जेलमा परेको छु, साथमा पासर्पोट नभएपछि कति समय जेलमा राख्छ टुंगो हुँदैन रहेछ, आउन पनि सक्छु जिवन भर जेलमै बित्न पनि सक्छ नआत्ती बस्नु, दुतावास तिर यताउता पहल ग¥यो भने आउन पनि सक्छु होला।‘ – रामबहादुर गुरूङ
आफ्नतका अनुसार रामबहादुर गुरुङ बिषयमा समेत दुतावासले जानकारी नभएको बताउने गरेको छ। बुढेशकालको साहारा ठानेका छोराको यो अवस्थाले अहिले न दिनमा भोक लाग्छ न रात निद्रा । एउटा छोरा त आउला भन्ने आशामा बाटो कुर्नुुको विकल्प छैन कुमारीसँग ।
कुवेतबाट फेरि बाहिरि’यो यी जोडिको यस्तो ह’र्कत भिडियो (हेर्नुहोस भिडियो)